ဒူဒူကြီး: Grit Blasting
သဘေ်ာရဲ့ Ship side, Hull, နဲ့ Bottom ကို ဆေးသုတ်ရန်၊ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းကို Surface Preparation လို့ခေါါပါတယ်။ Surface Preparation မှာ Hard Scraping, High Pressure Washing, Wash Down Washing နဲ့ Blasting တို့ပါဝင်ပါတယ်။
Fig. Surface Roughness
Fig. Hard Scraping
အရင်ဆုံး သဘေ်ာရဲ့ Ship Side, Hull နဲ့ Bottom မှာကပ်ငြိနေတဲ့၊ Marine Growth တွေ၊ Barnicles တွေ ကိုခွာချခြင်းကို၊ Hard Scraping လို့ခေါါပါတယ်။ Hard Scraping လုပ်ပြီးတဲ့အခါ ရေအားပြင်းပြင်း သုံးပြီး၊ ဆေးကြောခြင်းကိုတော့ High Pressure Washing လို့ခါါကာ၊ Ship Yard သဘေ်ာကျင်းတည်ရှိနေ တဲ့ နေရာဒေသပေါါမူတည်ပြီး၊ Sea Water ပင်လယ်ရေ ဒါမှမဟုတ် Raw Water မြစ်ရေကိုအသုံး ပြုဆေးကြောပါတယ်။ နောက်ဆုံး တခါ Fresh Water ကိုအသုံးပြုဆေးကြောခြင်းကိုတော့ Wash Down Washing လို့ခါါပါတယ်။
Fig. Hull Paint Flow Chart/ Surface Preparation
Fresh Water Washing လို့ခါါတဲ့၊ Wash Down လုပ်ပြီးရင်တော့ သဘေ်ာရဲ့ သက်ဆိုင်ရာ Attending Superintendent နဲ့ Classification Society မှ Attending Surveyor တို့ဟာ၊ မျက်မြင်အခြေအနေအတိုင်း Hull နဲ့ Bottom ကိုစစ်ဆေးကြပါတယ်။ Blasting မှာတော့ Spot Blast, Sweep Blast နဲ့ Full Blast ရယ် လို့၊ သက်ဆိုင်ရာ Paint Adviser ရဲ့ Recommendation အရဆောင်ရွက်လေ့ရှိပါတယ်။
Fig. Injector Blasting
Fig. Vapour Blasting
Surface Preparation ဖြစ်တဲ့ Blasting Method တွေဟာ Injector Blasting System, Vapor Blasting System, Tumblast system, Wet Blasting System နဲ့ Rotary table Blasting System အစရှိသလို၊ Work pieces တွေပေါါမူတည်ကာကွဲပြားခြားနားကြပါတယ်။ မျက်နှာပြင်ဧရိယာ Surface Area ကြီးမားတဲ့ သဘေ်ာရဲ့ Hull ကိုယ်ထည်မှာ Surface Preparation အဖြစ် Injector Blasting System နဲ့ Vapor Blasting System ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။
Blasting အတွက်အသုံးပြုတဲ့ Material တွေကို Metallic, Mineral နဲ့ Organic Materials တွေမှ၊ ထုတ်ယူ နိုင်ပါတယ်။ သဘေ်ာကျင်းတွေမှာတော့၊ ဟိုးအရင်က Sand သဲကိုအသုံးပြုခဲ့ရာမှ၊ Mineral သဘာဝ တွင်းထွက်ပစ္စည်းတမျိုးဖြစ်တဲ့ Grit ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။
Grit Blasting ဟာလည်း Pollution သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုနဲ့ Harmful Substance လူ့ ကျမ်းမာရေး ကိုပါ၊ ထိခိုက်စေတာမို့ နောက်ပိုင်းမှာ၊ ရေကိုအသုံးပြုတဲ့ Hydro-blasting နည်းလမ်းကို အသုံးပြုလာကြ ပါတယ်။
Fig. Spot Blast
Paint Adviser ရဲ့ Recommendation အရ၊ Spot Blast လုပ်မယ့် ဧရိယာတွေမှာ S.A 1.0 Grit ကို၊ သဘေ်ာကျင်းကအသုံးပြုကာ Blasting လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ Spot Blast လုပ်လေ့ရှိတဲ့နေရာတွေက Above the Water Line လို့ခေါါတဲ့ Load Line ရဲ့အထက်ပိုင်းဧရိယာတွေဖြစ်ပါတယ်။
Load Line အောက်က Ship Side, Hull အပါအဝင် Bottom ဧရိယာမှာတော့ Anti-fouling Paint သုတ်ဆေး ကိုအသုံးပြုထားတာမို့၊ Anti-fouling Paint ရဲ့ Detachment အနေအထားအရ Sweep Blast လုပ်မလား၊ ဒါမှမဟုတ် Full Blast လုပ်မလားဆိုတာကို ဆက်လက်ဆုံးဖြတ်ရပါတယ်။ Sweep Blast မှာ S.A 1.0 Grit ကိုသုံးကာ၊ Full Blast မှာတော့ S.A 2.0 Grit ကိုသုံးပါတယ်။
Fig. Bad Anti-fouling Detachment Condition (After Wash Down Washing)
မူလအသုံးပြုထားတဲ့ Anti-fouling ရဲ့ အခြေအနေဟာ၊ ကောင်းသေးရင် Sweep Blast လောက်သာ လုပ်ပြီး၊ မကောင်းရင်တော့ Full Blast လုပ်ကာ၊ မူလရှိပြီးသား Anti-fouling Paint တွေကို၊ ကုန်စင်အောင် ခွာချရပါတယ်။
Ship Side, Hull နဲ့ Bottom ကို Blasting လုပ်ပြီးရင်တော့ Plate တွေကိုမျက်မြင်အခြေအနေအတိုင်း၊ အပေါက်အပြဲရှိမရှိ သက်ဆိုင်ရာ Attending Surveyor, Attending Superintendent နဲ့ သဘေ်ာကျင်းမှ S.R.M လို့ခေါါတဲ့ Ship Repair Manager သို့မဟုတ် Repair Superintendent တို့ကစစ်ဆေးရပါတယ်။
Posted by ဒူဒူကြီး at 19:55